Bittree Celebrates Multiple Award Wins for Dante-Enabled Audio Patchbay – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » Bittree အကွိမျမြားစှာဆုချီးမြှင့် Dante-Enabled ပေး Audio Patchbay များအတွက်ဆွတ်ခူးပွဲပြုလုပ်
New Patch32A solution designed to help customers seamlessly bridge traditional analog and networked IP audio
Glendale, CA – April 16, 2019: Bittree –aleading manufacturer of high-quality audio, video and data patching systems – is going to needabigger trophy case after hauling inaremarkable four coveted industry accolades at the 2019 NAB ပြရန်. Designed to streamline the integration of traditional analog and IP network-based audio patching, the company’s Patch32A Dante audio patchbay was honored with Best of Show awards fromaquartet of publications by international media group Future plc: Pro Sound News, TV Technology, Sound & Video Contractor and Government Video.
1978 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Bittree State-Of-The-Art patchbays အပေါင်းတို့နှင့်အရွယ်အစား၏မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအတွက် signal ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းချောမွေ့ကြောင်း patch ကိုပြားကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထံအပ်နှံသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသံလွှင့်, postproduction နှင့်လိုလားသူတစ်ဦးက / V ကိုစစ်ဆင်ရေးများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အချက်အလက် patchbays တစ်ခုဆန်းသစ်လိုင်းပေးထားပါတယ်။ Post-ထုတ်လုပ်မှု, လိုလားသူတစ်ဦးက / V ကို, စနစ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်နယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့, Bittree ရဲ့ပြင်ဆင်ရန်မှာဖြေရှင်းချက်အသေးစိတ်အထူးသဖြင့်မစ်ရှင်-အရေးပါသောလုပ်ငန်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအဘို့, ရေရှည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်မှီခိုသေချာစေရန်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်။ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တင်းကျပ်အရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းမှလိုက်နာမှုသေချာစေရန်, ကုမ္ပဏီရဲ့ပြင်ဆင်ရန်မှာထုတ်ကုန်များ၏ရှိသမျှတို့, ဒီဇိုင်းစုဝေးနှင့်လင်းဒေးလ်လီဖိုးနီးယားရှိ၎င်း၏ State-Of-The-Art စက်ရုံအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်။ Bittree, စက်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) ၏တက်ကြွအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် NAMM (ဂီတကုန်သည်များအမျိုးသားအစည်းအရုံး) နှင့် SMPTE (Motion Picture & ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က) ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးwww.bittree.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု	2019-04-17
ယခင်: GatesAir နှင့် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘရာဇီးတီဗီမှတ်တမ်းများအတွက် ISDB-TB transmitter Upgrade
နောက်တစ်ခု: Qligent 2019 NAB Show မှာနှစ်ဦးဂုဏ်သတင်းဆုပေးပွဲအခမ်းအနားဆင်နွှဲ